China Palmitoyl Tripeptide-5 sy ny orinasa mpanamboatra | JYMed
Product name: Palmitoyl Tripeptide-5
Čas No .: 623172-56-5
Molekiolan'ny Formula: C37H67F6N5O9
Molekiolan'ny Weight: 839,959 g / Rol
Applications: Smooth hoditra, anti-fahanterana
Package: 10/20 / 50g / HDPE / PP tavoahangy, na feno araka ny mpanjifa ny fitakiana
Palmitoyl Tripeptide-5 no mandrafitra ny gadran 'ny asidra amine, ary manana ny fahafahana miditra ny epiderme sy hiditra lalina tao an-dermis, izay manentana collagen famokarana sy ny fitomboan'ny sela salama. Ary tsy Natomboka ny collagen sy voafintina teo amin'ny hoditra, fa tany am-boalohany fikarohana milaza fa io koa peptide manana ny fahafahana mifandray amin'ny hoditra sela sy hisorohana ny poizina izay tafiditra azy ireo tsy hanao loza. Ny ingredient manao izany amin'ny alalan'ny nanahaka ny vatana ny rafitra voajanahary fifandraisana izay milaza sela izay tokony hatao. Io karazana fifandraisana manampy hoditra na sela mba maoderina ny poizina, na mahatonga azy io inert. Palmitoyl Tripeptide-5 ny fanjakana araka ny nofo dia mazava fa ny rano tsy misy, ary ny rano fofona mety levona. Zavatra peptide dia hita ao amin'ny hoditra maro fikarakarana ny vokatra, fa izany no ampiasaina matetika indrindra ao amin'ny fanoherana ny fahanterana sy ny menaka tarehy seraoma. Palmitoyl Tripeptide-5 no ampiasaina amin'ny maro samy hafa manohitra ny fahanterana vokatra noho ny fahaizany mifandray amin'ny hoditra sela sy hampitombo collagen famokarana. Young tarehy, hentitra hoditra dia tsy azo atao raha tsy collagen, ary ny anti-panahy mahazo ny hoditra, ny tsy collagen dia mamokatra. Orinasa izay mamokatra manohitra ny fahanterana seraoma sy menaka no mampiasa Palmitoyl Tripeptide-5 tsy ihany satria milaza hoditra sela mba hampitombo collagen famokarana mazava ho azy, izany koa dia mahatonga azy io tena mahomby, tahaka ny vokatra izay misy collagen mety loatra matevina ho araka ny tokony ho tafiditra ny hoditra . Satria Palmitoyl Tripeptide-5 miasa avy ao anatiny avy mba hampitombo collagen famokarana, dia mety hahita vokatra tsara kokoa haingana kokoa noho ianao te raha nampiasa fanosotra na serum izay misy sela collagen avy amin'ny biby. Raha fanadihadiana momba Palmitoyl Tripeptide-5 mbola eo amin'ny dingana voalohany, dia misy tatitra vitsivitsy ny misy vokany lehibe ny amin'izany peptide. Na izany aza, raha mora hoditra, dia mety rehefa any amin'ny anti-fahanterana vokatra misy peptide izany. Ny sasany mahazaka fanehoan-kevitra mahazatra dia reddening ny hoditra, manindrona amin'ny toerana ny fampiharana, ary ny maimaika. Raha toa ianareo hiaina misy ireo olana rehefa mampiasa ny anti-be taona vokatra izay mirakitra Palmitoyl Tripeptide-5, dia tokony mijery ny hoditra hatrany mba hahafantarana na tsia ny peptide no mahatonga ny fanehoan-kevitra, na raha misy hafa vokatra ankapobeny dia mety ho tsara kokoa safidy ho an'ny ianao. "Fahadiovam-po Fanavaozana, Rigorousness, ary ny fahombiazan'ny" no maharitra bohoka ny mafy noho ny maharitra mba hamorona miaraka amin'ny mpanjifa ho an'ny fifanampiana reciprocity sy ny fandraisana valisoa ho an'ny Wholesale Price Cosmetic Raw Material Skin manamboatra Palmitoyl Tripeptide-5 / syn-Coll / Pal-kvk vovoka, ny fanohanana no hery mandrakizay! Amim-pitiavana ny mpanjifa tonga soa ao an-trano sy any ivelany mba hitsidika ny orinasa. "Fahadiovam-po Fanavaozana, Rigorousness, ary ny fahombiazan'ny" no maharitra bohoka ny mafy noho ny maharitra mba hamorona miaraka amin'ny mpanjifa ho an'ny fifanampiana reciprocity sy ny fandraisana valisoa ho an'ny Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl Tripeptide-5 vovoka, syn-Coll, Ianao dia afaka mahita foana ny vokatra sy ny vahaolana mila manana eo amin'ny orinasa! Tongasoa eto amin'ny manontany antsika momba ny vokatra sy ny zavatra fantatsika, ary isika dia afaka manampy eo amin'ny fiara piesy. Faly hatrany mba hiasa eo aminareo ny zava-misy fandresena-fandreseny.
Previous: Palmitoyl Tripeptide-1